သငျ့ဘဘေီလေးအတှကျ အစားအစာကို ကနျြးမာရေးနှငျ့ ညီညှတျအောငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ? - Lifestyle Myanmar
မမေတေို့ရေ.. ဘဘေီလေးအတှကျ ဖွညျ့စှကျစာ စကြှေးရတော့မယျဆိုရငျ ဒီဆောငျးပါးလေးကို ဖတျကွညျ့ပါနျော။ ကလေးအတှကျ ကနျြးမာတဲ့ အစားအစာကို ဘယျလိုလုပျမလဲဆိုတာ လလေ့ာနိုငျပါတယျ။
ဒီစာရငျးက ဥပမာတဈခုသာ ဖွဈပါတယျနျော။ အိမျမှာ သငျ့ကလေးအတှကျ ဒီအစားအစာတှပွေုလုပျပွီး မကြှေးခငျမှာ သူတို့အသကျအရှယျအလိုကျ ဘယျအစားအစာတှကေို ထညျ့ကြှေးနိုငျသလဲဆိုတာ အတိအကသြိဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကလေးဆရာဝနျဆီက အကွံဉာဏျရယူသငျ့ပါတယျနျော။
၆လနှငျ့ အထကျ ။ မိခငျနို့သာ တိုကျရပါမယျ။ သငျ့ဘဘေီလေးကို နို့ဘူးတိုကျနရေငျတောငျ အသကျ ၄လနှငျ့ ၆လအကွားမှာ သူတို့ရဲ့ အစားအသောကျထဲကို ကလေးအစားအစာ အနညျးငယျသာ ထညျ့သှငျးသငျ့ပါတယျ။
၆လနှငျ့ ၁၂လအကွား။ သဈသီးမြား၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြား။ စီရီရယျ၊ ပဲတောငျ့ရှညျမြိုးဖွဈသောပဲတှေ၊ ကွကျဥတှေ၊ အသား၊ ကွကျသား၊ ငါးနှငျ့ သံလှငျဆီ။
အသကျ ၁၂လနှငျ့ ၂၄လအကွား။ ဒိနျခဲအပြော့ ၊ ဒိနျခဉျြ၊ နို့။
၃နှဈနှငျ့ အထကျ။ အခှံမာသီး၊ ပနျးသီး၊ မုနျလာဥနီ၊ ကလေးမနငျနိုငျမယျ့ အစားအစာမြား။
လတျဆတျသော အသီးအနှံမြားနှငျ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြားကို ဝယျပါ။ သူတို့ရဲ့ ဂုဏျသတ်တိမြားမဆုံးရှုံးအောငျ အမြားဆုံး သုံးရကျအတှငျးမှာ အသုံးပွုဖို့ ကွိုးစားပါ။
အဆီနညျးတဲ့ အသားကို ရှေးခယျြပါ။ သငျ့ဘဘေီလေးအတှကျ ကနျြးမာတဲ့ အစားအစာပွငျဆငျဖို့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးက အဆီပိုလြှံမှုမှ ကာကှယျဖို့ အဆီနညျးတဲ့ အသားကို ဝယျဖို့ ဖွဈပါတယျ။ မခကျြခငျ အဆီကို လှီးထုတျပဈပါ။
ကလေးအတှကျ ထမငျးနှငျ့အသားကိုရောပွီး အနှဈတိုကျကြှေးမယျဆိုရငျ နူးညံ့တဲ့အသားကို အတုံးသေးသေးလေးတှတေုံးပွီး အသုံးပွုဖို့ သတိရပါ။ ကလေးကို ဖွညျ့စှကျစာမကြှေးခငျမှာ ကလေးဆရာဝနျတှဆေီက အကွံဉာဏျရယူပါ။
တဈကိုယျရညျ သနျ့ရှငျးရေးက ခကျြပွုတျတဲ့နရောမှာ အလှနျအရေးပါပါတယျ။
အသီးအနှံမြားနှငျ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြားကို တဈခုခငျြးစီ သသေခြောခြာ ဆေးကွောဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။
ခကျြပွုတျတဲ့အခါ ဆားလြှော့သုံးပါ။ ဆားအမြားကွီး အသုံးပွုရငျ ကလေးရဲ့ ကြောကျကပျထိခိုကျနိုငျတာကွောငျ့ ဆား အနညျးငယျမြှသာ သုံးသငျ့ပါတယျ။ တဈနှဈအရှယျကလေးအတှကျ ဆားသုံးစှဲမှုဟာ တဈနကေို့ ဆား ( ၁ )ဂရမျထကျ မပိုသငျ့ပါဘူး။ အသကျ ၃နှဈမှာ နစေ့ဉျ (၂) ဂရမျလောကျ ကြှေးနိုငျပါတယျ။
တခွားအဆီတှအေစား သံလှငျဆီကို ရှေးခယျြပါ။ သံလှငျဆီမှာ monounsaturated fatty acids, unsaturated fatty acidsနှငျ့ vitamin Eတို့ ပါရှိပါတယျ။
အနှဈတိုကျပွီး ကြှေးတဲ့အခါ နို့ထညျ့ကြှေးပါ။ သငျ့ကလေးကို ထမငျးနှငျ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှေ အနှဈတိုကျပွီး ကြှေးနလြှေငျ အနှဈက အရမျးပဈြပဈြကွီး မဖွဈဖို့ သတိထားပေးပါ။ ပဈြပဈြကွီးမဖွဈအောငျ နို့ သို့ရထေညျ့နိုငျပါတယျ။ သငျ့ကလေးပုံမှနျသောကျနကြေ နို့ ဒါမှမဟုတျ မိခငျနို့ထညျ့ပွီး ကြှေးနိုငျပါတယျ။
ထမငျး၊ ကွကျသားနှငျ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျကို ရောကြှေးမယျဆိုရငျ ပထမဆုံး ဟငျးသီးဟငျးရှကျနှငျ့ ကွကျသားအတုံးသေးသေးလေးတှကေို နူးအိသှားတဲ့အထိ ပွုတျပါ။ ကွကျသားဖကျတှကေို ဖယျထားပွီး ကွကျပွုတျရညျထဲမှာ ထမငျးထညျ့ခကျြပါ။ ကကျြသှားရငျ ထမငျးကို ခပြွေီး အနှဈပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
ထမငျးနှငျ့မဟုတျဘဲ အသီးအနှံကို အနှဈပွုလုပျပွီး သရစော ကြှေးမယျဆိုရငျ ပနျးသီး၊ ငှကျပြောသီး၊ သဈတျောသီးကို သုံးနိုငျပါတယျ။ ပနျးသီးနှငျ့ သဈတျောသီးကို အခှံနှာ၊ အစထေု့တျပွီး အတုံးသေးသေးလေးတှတေုံးပွီး ခကျြပါ။ နူးအိသှားတဲ့အခါ ငှကျပြောသီးနှငျ့အတူ blender ထဲမှာ ကွိတျပါ။ သကွားမထညျ့ပါနဲ့။ နို့ဖွဈဖွဈထညျ့နိုငျပါတယျ။
သငျ့ကလေးရဲ့ အစာအိမျက သေးသေးလေးပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ သူတို့ကို စားဖို့ အတငျးမကြှေးပါနဲ့။ သငျ့အတှကျ သေးငယျတဲ့ ပမာဏလို့ထငျရပမေယျ့ ကလေးအတှကျ လုံလောကျတာထကျ ပိုနိုငျပါတယျ။
သင့်ဘေဘီလေးအတွက် အစားအစာကို ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
မေမေတို့ရေ.. ဘေဘီလေးအတွက် ဖြည့်စွက်စာ စကျွေးရတော့မယ်ဆိုရင် ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်ပါနော်။ ကလေးအတွက် ကျန်းမာတဲ့ အစားအစာကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီစာရင်းက ဥပမာတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ အိမ်မှာ သင့်ကလေးအတွက် ဒီအစားအစာတွေပြုလုပ်ပြီး မကျွေးခင်မှာ သူတို့အသက်အရွယ်အလိုက် ဘယ်အစားအစာတွေကို ထည့်ကျွေးနိုင်သလဲဆိုတာ အတိအကျသိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးဆရာဝန်ဆီက အကြံဉာဏ်ရယူသင့်ပါတယ်နော်။
၆လနှင့် အထက် ။ မိခင်နို့သာ တိုက်ရပါမယ်။ သင့်ဘေဘီလေးကို နို့ဘူးတိုက်နေရင်တောင် အသက် ၄လနှင့် ၆လအကြားမှာ သူတို့ရဲ့ အစားအသောက်ထဲကို ကလေးအစားအစာ အနည်းငယ်သာ ထည့်သွင်းသင့်ပါတယ်။
၆လနှင့် ၁၂လအကြား။ သစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ။ စီရီရယ်၊ ပဲတောင့်ရှည်မျိုးဖြစ်သောပဲတွေ၊ ကြက်ဥတွေ၊ အသား၊ ကြက်သား၊ ငါးနှင့် သံလွင်ဆီ။
အသက် ၁၂လနှင့် ၂၄လအကြား။ ဒိန်ခဲအပျော့ ၊ ဒိန်ချဉ်၊ နို့။
၃နှစ်နှင့် အထက်။ အခွံမာသီး၊ ပန်းသီး၊ မုန်လာဥနီ၊ ကလေးမနင်နိုင်မယ့် အစားအစာများ။
လတ်ဆတ်သော အသီးအနှံများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ဝယ်ပါ။ သူတို့ရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိများမဆုံးရှုံးအောင် အများဆုံး သုံးရက်အတွင်းမှာ အသုံးပြုဖို့ ကြိုးစားပါ။
အဆီနည်းတဲ့ အသားကို ရွေးချယ်ပါ။ သင့်ဘေဘီလေးအတွက် ကျန်းမာတဲ့ အစားအစာပြင်ဆင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက အဆီပိုလျှံမှုမှ ကာကွယ်ဖို့ အဆီနည်းတဲ့ အသားကို ဝယ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မချက်ခင် အဆီကို လှီးထုတ်ပစ်ပါ။
ကလေးအတွက် ထမင်းနှင့်အသားကိုရောပြီး အနှစ်တိုက်ကျွေးမယ်ဆိုရင် နူးညံ့တဲ့အသားကို အတုံးသေးသေးလေးတွေတုံးပြီး အသုံးပြုဖို့ သတိရပါ။ ကလေးကို ဖြည့်စွက်စာမကျွေးခင်မှာ ကလေးဆရာဝန်တွေဆီက အကြံဉာဏ်ရယူပါ။
တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေးက ချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာ အလွန်အရေးပါပါတယ်။
အသီးအနှံများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို တစ်ခုချင်းစီ သေသေချာချာ ဆေးကြောဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
ချက်ပြုတ်တဲ့အခါ ဆားလျှော့သုံးပါ။ ဆားအများကြီး အသုံးပြုရင် ကလေးရဲ့ ကျောက်ကပ်ထိခိုက်နိုင်တာကြောင့် ဆား အနည်းငယ်မျှသာ သုံးသင့်ပါတယ်။ တစ်နှစ်အရွယ်ကလေးအတွက် ဆားသုံးစွဲမှုဟာ တစ်နေ့ကို ဆား ( ၁ )ဂရမ်ထက် မပိုသင့်ပါဘူး။ အသက် ၃နှစ်မှာ နေ့စဉ် (၂) ဂရမ်လောက် ကျွေးနိုင်ပါတယ်။
တခြားအဆီတွေအစား သံလွင်ဆီကို ရွေးချယ်ပါ။ သံလွင်ဆီမှာ monounsaturated fatty acids, unsaturated fatty acidsနှင့် vitamin Eတို့ ပါရှိပါတယ်။
အနှစ်တိုက်ပြီး ကျွေးတဲ့အခါ နို့ထည့်ကျွေးပါ။ သင့်ကလေးကို ထမင်းနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ အနှစ်တိုက်ပြီး ကျွေးနေလျှင် အနှစ်က အရမ်းပျစ်ပျစ်ကြီး မဖြစ်ဖို့ သတိထားပေးပါ။ ပျစ်ပျစ်ကြီးမဖြစ်အောင် နို့ သို့ရေထည့်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ကလေးပုံမှန်သောက်နေကျ နို့ ဒါမှမဟုတ် မိခင်နို့ထည့်ပြီး ကျွေးနိုင်ပါတယ်။
ထမင်း၊ ကြက်သားနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို ရောကျွေးမယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ကြက်သားအတုံးသေးသေးလေးတွေကို နူးအိသွားတဲ့အထိ ပြုတ်ပါ။ ကြက်သားဖက်တွေကို ဖယ်ထားပြီး ကြက်ပြုတ်ရည်ထဲမှာ ထမင်းထည့်ချက်ပါ။ ကျက်သွားရင် ထမင်းကို ချေပြီး အနှစ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ထမင်းနှင့်မဟုတ်ဘဲ အသီးအနှံကို အနှစ်ပြုလုပ်ပြီး သရေစာ ကျွေးမယ်ဆိုရင် ပန်းသီး၊ ငှက်ပျောသီး၊ သစ်တော်သီးကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ ပန်းသီးနှင့် သစ်တော်သီးကို အခွံနွှာ၊ အစေ့ထုတ်ပြီး အတုံးသေးသေးလေးတွေတုံးပြီး ချက်ပါ။ နူးအိသွားတဲ့အခါ ငှက်ပျောသီးနှင့်အတူ blender ထဲမှာ ကြိတ်ပါ။ သကြားမထည့်ပါနဲ့။ နို့ဖြစ်ဖြစ်ထည့်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ကလေးရဲ့ အစာအိမ်က သေးသေးလေးပါ။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ကို စားဖို့ အတင်းမကျွေးပါနဲ့။ သင့်အတွက် သေးငယ်တဲ့ ပမာဏလို့ထင်ရပေမယ့် ကလေးအတွက် လုံလောက်တာထက် ပိုနိုင်ပါတယ်။